NVIDIA DIA EFA NAMOAKA KARATRY NY LAHATSARY GEFORCE MANARAKA AN'ARIVONY - VAOVAO - 2019
Nvidia nikaroka karatra grafika vaovao
Ny fanambarana ny karatra horonantsary GeForce manaraka dia andrasana ao anatin'ny volana vitsy monja, saingy araka ny tsaho dia efa niomana tsara i Nvidia. Araka ny loharanom-pihariana PCGamesN, ny tahirin-tsarimihetsika vita pirinty vita amin'ny horonan-tsarimihetsika ao amin'ny toeram-pivarotana amerikana dia mahatratra antsasak'alina.
Raha toa ka marina ny fampahalalana momba ny adihevitra be dia be vao haingana, ny GeForce vaovao dia afaka miditra an-tsena amin'ny ambaratonga maro raha vantany vao misy fanambarana. Tsy midika izany fa ny tsy fisian'ny olana amin'ny fampiasana fitaovana, fa koa mamela ireo mpamatsy hanakana marika maromaro amin'ny fanombohana ny varotra. Na dia izany aza, tsy misy fanamafisana fa mandresy lahatra ireo tsaho ireo, ary ny dingana teo aloha dia nanambara fa ny isan'ireo karatra vaovao amin'ny voalohany, mifanohitra amin'izay, dia mety ho voafetra ihany.
Talohan'io, tsaroanay fa ny tranonkala dia manana fampahalalana fa ny h2gaming.vn, Vietnamiana amin'ny aterineto dia nanomboka naka baiko mialoha ny Nvidia GeForce GTX 1180. Ny mpilalao ASUS amin'ny 16 GB ny fahatsiarovana dia nomena amin'ny 1530 dolara.